737 ဂန္ထဝင်ပေါင်းစုံ pack ကိုပြဿနာ
မေးခွန်း 737 ဂန္ထဝင်ပေါင်းစုံ pack ကိုပြဿနာ
2 နှစ်ပေါင်း6months ago -2နှစ်ပေါင်း6months ago #826 by deckerb
ဒါကြောင့်ရုတ်တရက်တောင်တက်နီးပါးတစ်တင်းကုပ်အနေအထားကိုမှတက် pitching နဲ့ပြဿနာဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ပုံရသည်။ ဒါ့အပြင် takeoff လိပ်ပေါ်အလိုအလျောက်တွန်းကန်အားနှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲအရှိန်မြှင့်ရန်နာကျင်စွာနှေးထိုး။ အဆိုပါ takeoff လိပ်ပေါ်တောင်မှ 140 မှရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရှိသည်။ ဒေါင်းလုဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်ချက်အချို့ကိုအားဖြင့်စီရင်တော်, ငါသည်ဤပြဿနာနှင့်အတူတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ဘူး။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း6months ago နေဖြင့် deckerb။ အကြောင်းပြချက်: လွတ်သွားသောစကားများ
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #827 by xHobbit420x
Google နှင့်ကို default 164 များအတွက် 737 liveries အထုပ် download လုပ်ပါ။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #828 by deckerb
တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Default 737 မှာဒီ pack ရဲ့ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့တိုးတက်မှုမရှိပါ။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #829 by bencas
တိ tab ကိုရုတ်တရက်အစေးတက်ထောင့်ကို fix သင့်ကြောင်း 1.7-1.8 ဒီဂရီဟုသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသတ်မှတ်ထားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။
2 နှစ်ပေါင်း3months ago -2နှစ်ပေါင်း3months ago #939 by DRCW
ဒါကဒီပြproblemနာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ဖတ်ပြီးတာပါ၊ ၇၃၇-၈၀၀ အတွက်ပြanနာမဟုတ်တာကဒီမော်ဒယ်ဟောင်းမျိုးဆက်အတွက်ပြisနာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည် ... သွားပါ CFG လေယာဉ်အတွက်ဖိုင်နှင့်မျဉ်းကိုရှာဖွေ [အင်ဂျင်] အပိုင်းကိုဆင်း scroll Static_Thrust = တွန်းအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 4000 ဥပမာကိုဖတ်ပါကပြောင်းလဲပါ Static_Thrust = 22980 ဒါကြောင့်ဖတ်နိုင်အောင်တွန်းကန်အား၏ 4000 ပေါင် Add Static_Thrust = 26980 ထို့နောက် save လုပ်ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း3months ago နေဖြင့် DRCW.
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: isidel
2 နှစ်ပေါင်း3months ago #948 by misshu
ဖိုင်များအတွက် CFG အဘယ်မှာရှိသနည်း ငါကရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေတာနဲ့ငါကနေရာချထားရန်မထင်နိုင်ပါတယ်
2 နှစ်ပေါင်း3months ago -2နှစ်ပေါင်း3months ago #949 by DRCW
မင်္ဂလာပါအိုကေ၊ သင့် windows icon ကိုနှိပ်ပါ၊ သင့် screen ၏ဘယ်ဘက်အောက်ခြေတွင်စတင်ပါ။ ကွန်ပျူတာကိုသွားပါ။ drive C / program x86, Microsoft ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဖိုင်ရှိသင့်သည်။ FSX, ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရှည်လျားသောစာရင်းလည်းမရှိ ... ကို select SimObjectsထို့နောက်ကို select လေယာဉ်ပျံ .... ဒီနေရာမှာရှိရာအဘို့သင့်လေယာဉ်များဖြစ်ပါသည် FSX သိမ်းဆည်းထားပါ ... သင်ရှာဖွေနေသောလေယာဉ်ကိုရှာဖွေပါ။ ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ၊ ထိုစာရင်းထဲတွင်ပါ လေယာဉ်ပျံ cfg ဒါက CFG ဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပိုပြီးငါ့ကိုသိပါစေကိုကူညီပေးပါတယ်။ ဒါဟာသင်ရှိသည်ပြတင်းပေါက်၏အဘယ်အရာကိုဗားရှင်းကိုသိရန်အကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ကပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးရှေ့တော်၌ cfg ဖိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတူပွင့်လင်း select လုပ်ဖူးဘူးကတည်းက "notepad [/ color ကို]"
ငါ CRJ-700 ကနေဒီဆွဲ
ရရှိနိုင် reverser_available = 1 // ထိုးပြောင်းပြန်?
စေ့စပ် afterburn / reheat နှင့်အတူ AfterBurnThrustSpecificFuelConsumption =0// TSFC
2 နှစ်ပေါင်း3months ago #964 by superskullmaster
ငါသည်သင်တို့အဘို့ကအားလုံးကိုမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်မြှင့်အထုပ်ရှိသည်။ အဖြစ်မကြာမီငါလိမ့်မည် upload လုပ်မယ့်နည်းလမ်းရှာသည်။